Ndị akaebe hụrụ nwata ahụ Jizọs nọ na Padre Pio | Ilblogdellafede
Ndịàmà hụrụ ahụ nwa Jesus Jesus n’aka Padre Pio
Saint Padre Pio hụrụ Christmas n'anya. O nweela ofufe pụrụ iche nye Jizọs mgbe ọ bụ nwata.
Dabere na onye Capuchin onye nchụàjà Fr. Joseph Mary Elder, “N'ụlọ ya na Pietrelcina, ọ kwadebere ọnọdụ ọmụmụ gbasara onwe ya. Ọ na-ebido ịrụ ọrụ na ya kemgbe mbido Ọktoba. Mgbe ọ na-azụ atụrụ nke ezinụlọ ya na ndị enyi ya, ọ ga-achọ ụrọ ọ ga-eji mee ka ihe atụ nke obere ndị ọzụzụ atụrụ, atụrụ na magi. O lebara anya nke ọma wee kee Jizọs bụ nwa, na-ewulite ya ma na-ewughachi ya ruo mgbe ọ chere na ọ ziri ezi. "
Ndinam emi ama odu ye enye ke ofụri eyouwem esie. N'akwụkwọ ozi o degaara nwa ya nwanyị ime mmụọ, o dere, sị: “Mgbe Holy Novena bidoro ịsọpụrụ nwatakịrị Jizọs, o yiri ka a na-amalite mmụọ m ịbanye na ndụ ọhụrụ. Ọ dị m ka obi m pere mpe ịnabata ngọzi nile nke elu-igwe anyị. ”
Etiti Mass n’abali bụ ọ celebrationụ ọ forụ maka Padre Pio, onye na-eme ya kwa afọ, na-eji ọtụtụ elekere eji eme Mass Nsọ nsọ. Ewooro mkpụrụ obi ya na Chineke na nnukwu ọ joyụ, ọ joyụ nke ndị ọzọ na-ahụ ngwa ngwa.
Ọzọkwa, ndị akaebe kwuru etu ha ga-esi hụ Padre Pio na-ejide Nwa ahụ Jizọs.
Renzo Allegri na-akọ akụkọ a.
Anyị gụchara chaplet mgbe anyị na-eche Mass. Padre Pio so anyị na-ekpe ekpere. Na mberede, n'enwu ọkụ, ahụrụ m Jizọs bụ Nwatakịrị Jizọs ka o gosipụtara n’aka ya. Padre Pio nwogharịrị, anya ya lebara nwatakịrị ahụ na-enwu enwu na ogwe aka ya, ihu ya gbanwere site na ọchị dị ịtụnanya. Mgbe ọhụụ ahụ kwụsịrị, Padre Pio ghọtara site n'ụzọ m lere anya ya na ọ hụla ihe niile. Mana ọ bịakwutere m ma gwa m ka m ghara ịgwa onye ọ bụla maka ya.
A kọrọ akụkọ yiri nke ahụ Fr. Raffaele da Sant'Elia, onye bi na Padre Pio ruo ọtụtụ afọ.
Ebiliri m ịga ụka maka Mass etiti abalị 1924. corlọ dị nnukwu ma gbaa ọchịchịrị, naanị ọkụ ahụ bụ ọkụ nke obere oriọna mmanụ. Site na ndo ahụ, ahụrụ m na Padre Pio na-aga n'isi ụka. Ọ hapụrụ ọnụ ụlọ ya ma jiri nwayọ na-agbadata n'ụlọ nzukọ ahụ. Achọpụtara m na e kekọtara ya na igwe nwere ọkụ. M lere anya karịa wee hụ na o nwere nwa ahụ n’aka Jizọs. M guzoro ebe ahụ, mara m n'ọnụ ụzọ ụlọ m, wee daa ikpere m. Padre Pio gafere, niile. Ọ chọpụtabeghị na ị nọ ebe ahụ.
Ihe omume a karịrị nke mmadụ na-egosi na Padre Pio nwere ịhụnanya miri emi na nke na-adịgide adịgide nke Chineke.
Ka anyi onwe anyi meeghe obi anyi inata Nwa Jisos na ubochi ekeresimesi ma mee ka ihunanya nke Chineke ghara inweta anyi jiri obi uto nke Kraist
← Na post gara aga Gara aga post:Nrara nye Santa Brigida na nkwa ise nke Jesus
Ọzọ Post → Post ozo:Mee ụdị obiọma na-enweghị atụ, hụ ihu Chineke